APICMO pharmaceutical Manufacturer ye CMO / CDMO Intermediates
Zviduku-duku nehuwandu hwekugadzira zvigadzirwa
APICMO inoshandiswa kubva kumabhirigiramu kuenda kune matani ekugadzirwa kwemahombekombe
isu takazvipira kune hukuru hwepamusoro uye cGMP zvido zvekugadzira zvezvigadzirwa kuti tive nechokwadi chokuti zvibatsiro nemishonga zvinosangana nepamusoro pehutano hwehutano.
APICMO ikambani yemishonga inokurudzira midzi inokosha yemishonga mitsva. Inonyanya kuisa pakupa sangano rakazara rekugadzira uye kushandiswa kwebasa rekutsvakurudza mishonga uye masangano ekusimudzira uye makambani ekurapa.
WAKARURWA NA APICMO BIOCHEMICAL INC.
APICMO ine simba rakadzika R & D uye masayendisiti anoziva - Dr. JACK. Isu tine chikwata chikuru chekugadzira uye sangano rekutungamira kwebhizimisi. Vatungamiri veboka re APICMO vanowanzobva kunyika dzakabudirira dzakadai seUnited States, Europe neJapan. Zvinopfuura makore 10 emabhizimisi mune zvekambani mumakambani emarudzi akawanda emishonga. Pashure pemakore anopfuura gumi ekutengesa kwemakethe, APICMO ine nheyo yakawanda yekubatanidzwa mumishonga inoshandiswa kwemishonga inodhaka.
APICMO inopa hutano hwakabatana hunosimbiswa nemitemo yedu yakaoma pamusoro pekudzivirira kweIntellectual Property (IP), kuita kuti mapurogiramu atarwe munzvimbo yakanyanyisa yakavanzika.
Mumakore akapfuura, APICMO yave iri kupa huwandu hwakanaka hwekugadzirwa kwekutanga uye hwekugadzira. Basa redu rinosvika pamabhegi maduku emamiriyoni kusvika kune matani ehuwandu hwekuita basa rekugadzira.
APICMO yeDrug Discovery is cloud-based cognitive solution, iyo inoongorora ruzivo rwezvesayenzi nedheta kuti ibudise zvisizvo zvisingazivikanwi uye zvakavanzika izvo zvinogona kubatsira kuwedzera mikana yekubudirira kwesayenzi.
Yedu yemakemikari inosimudzira tende, yakave nezvakawanda kupfuura 50 masayendisiti muChina, izvo zvinodarika zvinotarisirwa kudarika mapurojekiti akawanda akaoma, inoshanda mu state-of-the-art laboratories yakagadzirirwa nehuwandu hwekugadzira uye kuongorora zvigadzirwa.
Isu Takavimbwa Nenyika Dzakasunga Makambani
2016. ZVIMWE NEMABABHIRATORI MITAMBO
2018. MUBATSIRO WAKANAKA
Basa rebasa: kubva pamamiriyoni kusvika kumazana e kilogram. Tine sangano rekucherechedza revamiririri ve10, avo vari kutarisira misika yakawanda, vachitsvakurudza mune zvakasiyana-siyana zvigadzirwa uyewo avo vanogona kuChina vapeji, zvigadzirwa zvemiti, nezvimwewo.
06 / 05 / 20190 zvaanofarira
08 / 30 / 20180 zvaanofarira
08 / 28 / 20180 zvaanofarira
08 / 18 / 20180 zvaanofarira
07 / 19 / 20181 Comment0 zvaanofarira
07 / 18 / 20181 Comment0 zvaanofarira
07 / 18 / 20182 Comments0 zvaanofarira
Best Best Award Winner
Kuvimbika uye Kuvimbika.